Iwebhusayithi "Flibusta" is a khulula ze-non-inzuzo umtapo online. Lapha ungakwazi ukufunda yokulanda izincwadi etholakalayo. Imisebenzi ngesiRashiya kuyatholakala uma kulandwa kubo bonke abavakashi isevisi. Ukuze ufunde incwadi ngumuntu umlobi angaphandle, kumele wena bhalisiwe kusayithi. Abantu ngizibuze ukuthi ukuya "Flibustu"?
Iqiniso lokuthi Juni 22, 2015 baseRussia baye balahlekelwa ukufinyelela umtapo online. Izikhungo uvinjiwe isinqumo senkantolo. Ngemva konyaka, efanayo indawo flibusta.is yadalwa. Le sevisi ngokuhamba kwesikhathi uye futhi ivinjiwe. Ukuze abasebenzisi abasazisayo imitapo lula, nokukhawula ukufinyelela isayithi akubi kwesithiyo.
Ukhiye kungenziwa indiva kalula. Alternatives ukufinyelela indawo kuzovumela abasebenzisi ukufunda izincwadi zakho ozithandayo bese uyazilanda mahhala.
Indlela ukuya "Flibustu" usebenzisa izandiso isiphequluli? Ukuze wenze lokhu, landa ngaphezu 'Ukufinyelela rutrekere "noma Browsec. Lezi izandiso zikuvumela ukundlula evinjiwe umtapo online. Ngaphezu kwalokho, kumele kusebenze uma uvakashela isayithi noma ngaphandle kwe-uma uvala ikhasi. Le ndlela ungakwazi ukulawula ijubane izakhiwo ukulayisha sewebhu.
ukwelekelela inkinobho amandla ekhoneni eliphezulu kwesokudla lesiphequluli. Ukunwetshwa ingena esikhundleni IP-ikheli. "Flibusta" sayithi livinjiwe kuphela eRussia. Amakhasimende bakwamanye amazwe kusadingeka ukufinyelela umtapo online. Ukusebenzisa kwalokho, ungakwazi ukushintsha indawo yamanje ku-intanethi.
Indlela ukuya "Flibustu" ngokusebenzisa "Thor"
Inani elikhulu izincwadi emtatsheni wezincwadi inthanethi lususiwe kusukela ukufinyelela komphakathi ngesicelo abaphethe ilungelo lobunikazi. Indlela ukuya "Flibustu" futhi uthole umkhiqizo oyifunayo? abasebenzisi Advanced thwebula uhlelo Tor yesiphequluli. Ngemuva kokufaka isicelo, kufanele ufunde imiyalelo futhi ongakhetha eziyisisekelo.
Okulandelayo, kufanele agijime Umbuso indawo. Khona-ke kumelwe uvule uhlelo ikheli flibusta.is. Ngenxa isicelo usebenza ngendlela efanayo kwezinye iziphequluli ezithandwa, kufanele kuphakama izinkinga. Ekhasini eyinhloko umtapo online kufanele kube isixhumanisi kuya version website ye Tor.
Indlela ukuya "Flibustu" ngaphandle ukulanda isicelo? Ukuze wenze lokhu, vakashela amasevisi TOR2Web ezivumela ukuvula ivinjiwe Amakhasi wewebhu ngaphandle kokuba ukufaka lolu hlelo.
Okunye izindlela yokuwuthola lock
Umsebenzisi angasebenzisa isiphequluli elula ukusetha kusuka "Immunisiti". Akazange abe ukufaka lolu hlelo nokudlondlobala. Ngo "Yandex Isiphequluli", ne-Opera Turbo Mode isebenze futhi nesayithi libe "Flibusta. cha "ukuhamba.
Abanye abasebenzisi isisetshenziswa evulekile nge proxy.flibusta.me link. Ungasebenzisa amasevisi I2P2Web. Lawa amasayithi uvumele ukuvakashela ikhasi Web ngaphandle kokusebenzisa I2P.
Indlela ukulanda "Flibusty"
Online umtapo olunikezwa abafundi ngendlela ethakazelisayo yokuwuthola ukuvaleka, okuyinto kwabangelwa izimangalo yendlu ukushicilela "Eksmo". Manje abasebenzisi ungathola imisebenzi ezidingekayo ngokusebenzisa yocingo. Ababhali yephrojekthi ngikudalile irobhothi owabayo izincwadi i database olunzulu. Robot ithumela izixhumanisi imisebenzi ngesicelo ngqo inkhulumomphendvulwano. Uhlelo libizwa Flibusta bot.
Ukuze uthole wayefisa ncwadi khulula, udinga ukuthumela irobhothi kwesihloko noma umbhali we ncwadi. Ngemva kwalokho, umsebenzisi uzothola umyalezo ehlanganisa uhlu imikhiqizo etholakala database umtapo online. Ngesicelo "umphenyi" noma "umlando okunye" "Flibusta bot" kuyonikeza imiphumela efanele.
Bese ukhetha format ukulandwa. Khona-ke bot uzothumela umkhiqizo ngqo inkhulumomphendvulwano. Naphezu kweqiniso lokuthi abaqondisi kukhona imitapo inthanethi zishintshile domain ngenxa nezidingo bamalungelo akunakwenzeka ukulanda izincwadi eziningi ingxenye "yesayensi", "temibhalo yephrozi netindzaba owayephila", "umlando okunye". "Flibusta bot" inikeza umsebenzisi ngisho izincwadi ukungena kuwo. Amafayela zivela ngokuqondile database.
Indlela ukulanda abasebenzisi izincwadi iOS / iPad
Isinyathelo sokuqala siwukuba ukulanda kusuka ohlelweni AppStore Tor yesiphequluli. Khona-ke udinga ukufaka futhi ugijime isicelo. Okulandelayo, qiniseka ukuthi Umbuso indawo isebenza. Inkinobho maphakathi isikrini oluhlaza. Uma kunesidingo, ungashintsha esibonakalayo ku-Russian.
Ngemva kwalokho ufuna ukudayela http://flibustahezeous3.onion kwibha yekheli. Okulandelayo, udinga ukungena ngemvume futhi uvule ikhasi yomsebenzi noma umbhali. Abasebenzisi abaningi baye babhekana nezinkinga uma ulanda amabhuku ku-iPad yakho. Esikhundleni sokuya eholidini isixhumanisi "thwebula" ungachofoza imeyili inkinobho. Ekhasini elilandelayo unikeze ikheli le-imeyili.
Okulandelayo udinga ukukhetha format FB2. Khona-ke "thumela" inkinobho ufuna uchofoze. Ngemva kwalokho, kumelwe siqiniseke ukuthi incwadi ithunyelwe ekhelini le-imeyili. Umsebenzisi uzothola iisxhumanisi. Ngemva kokuchofoza kuso umkhiqizo ezizolandwa ku-iPad yakho.
Izincwajana ODPS e FBReader
Kanjani ukuze ungeze "Flibustu" e isicelo sokufunda izincwadi? Ukuze wenze lokhu, kudingeka ukuba uxhume idivayisi yeselula kwi-Inthanethi. Khona-ke udinga ukufaka futhi ugijime lolu hlelo FBReader. Kwalandela iya kumenyu main bese uchofoze inkinobho Network Library. Itholakala ohlangothini kwesokunxele FBReader iwindi.
Lokhu kuvula uhlu imitapo inthanethi. Lolu hlu kufanele kube ngesixhumanisi "engeza lwemibhalo" futhi chofoza kukho. Uma uhlelo uzokubuza yiziphi izinhlelo zokusebenza umsebenzisi ufuna ukusebenzisa ukwenza isenzo, kudingeka ukhethe into «FBReader». Kulandele chofoza inkinobho "njengamanje." Iwindi lizovula inkambu ekhethekile ofuna ucacise i-URL umtapo online.
Kulesi umugqa, faka ikheli OPDS https://flibusta.is/opds lwemibhalo. Ngemva ecacisa indlela isidingo inkonzo ezisekelwe uchofoze inkinobho "OK". Uzobona iwindi eyengeziwe nge 3 zombhalo, okuyinto zizobonisa igama umtapo futhi ukubhekana OPDS ikhathalogi. Emkhakheni yokugcina, faka incazelo kusayithi axhunyiwe. Izinguquko basindiswe, kumelwe uchofoze "KULUNGILE".
Ukusebenzisa ikhathalogi OPDS
Ngemuva yokuxhuma inthanethi umtapo umsebenzisi uzokwazi ukufunda imisebenzi futhi ukulanda nabo ngokuqondile base inkonzo. OPDS ikhathalogi izoboniswa uhlu lwamasayithi etholakalayo. Abasebenzisi abafuna ukulanda ncwadi, ukuya "Net-Library" kwesigaba isicelo, bese ukhetha umthombo ohlwini jikelele. Ububi usebenzisa le ndlela iba ukungabi khona ucwaningo usebenza kwisikhangisi. Umsebenzisi ngesandla faka isihloko sencwadi noma umbhali.
Uma idatha edingekayo zaziwa, ukuthola umsebenzi akunzima. Kuyaphawuleka ukuthi ukuze ufinyelele kwisikhangisi inthanethi bese ulande izincwadi kumele ube esitebeleni inthanethi. Emva ukulanda umkhiqizo, bese ugcine kudivayisi yakho, ungakwazi ukugqashula ukuxhumeka kunethiwekhi. Lokhu kuyokwenza ugcine traffic.
Ukuze uqhubeke ufunda incwadi, kudingeka ulithole kwimenenja yefayela noma FBReader isicelo. Ukuvula "umtapo" kwesigaba ewindini, ungabona wonke umkhiqizo agcinwe.
Master of Sports laseStanislav Zhuk: Biography, izimpumelelo yezemidlalo empilweni yakho
I-Cutlet ngaphakathi ngeqanda. Izindlela zokupheka ezahlukene